DVB Debate – မြန်မာ့ ပညာရေး – အရေအတွက်လား ? အရည်အချင်းလား ? “သူငယ်တန်းမှာ ကလေး အယောက် ၁၀၀ စနေရင် တက္ကသိုလ်ရောက်တာ ၁၀ ယောက်လောက်ပဲရှိပြီး ၆ ယောက်လောက်ပဲ ဘွဲ့ရတယ်ပေါ့။ ဒါဟာ ကျောင်းထွက်နှုန်း အရမ်းများတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။” ဒေါက်တာ ခိုင်မြဲ – ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကျောင်းပြင်ပနှင့် တသက်တာပညာရေး ဦးစီးဌာန (ပညာရေး ၀န်ကြီး ဌာန)၊ အတွင်းရေးမှူး (အမျိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်) “မြန်မာ့ပညာရေး ကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင် အသက်ရှင်နေတဲ့ မျိုးဆက်တိုင်းက ပညာရေး အရည်အသွေး မပြည့်မီကို ခေတ်အဆက်ဆက် ခံခဲ့ရတယ်။” ဦးသိန်းနိုင် – တိုင်းရင်းသား ပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ “ပထမတန်း …Read more »
4262 October 20, 2017
DVB TV – ကွမ်းယဉ်ကျေးမှု တိုက်ဖျက်နိုင်ပါ့မလား ( စီးပွားရေး ဒီဘိတ် ) “ဥပဒေနဲ့တိုက်ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ယူအေအီး နိုင်ငံမှာကွမ်းစားရင်ထောင်ဒဏ် အထိရှိတယ်။ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း ဟိုးရှေးတုန်းက ရခိုင်ဘုရင်မင်းထီးလက်ထက်မှာပေါ့နော်၊အား လုံးက ကွမ်းစားကြတယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ကွမ်းစားပြီးရင် တိုင်တွေမှာလျှောက်သုတ် ကြတယ်။ဒီတော့တိုင်တွေညစ်ပတ်ကုန်လို့ ထုံးမသုတ်ရဘူးဆိုပြီးကန့်သတ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံး သူကိုယ်တိုင်ထုံးသုတ်မိလို့ သူ့လက်ချောင်းသူဖြတ်ပြစ်လိုက် တယ်။အဲ့လိုမျိုးသံမဏိအမိန့်ထုတ် နိုင်မလား” – ဒေါက်တာအောင်ထွဋ်ပိုင် “ဒီမိုကရေစီနည်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်အမြင်အရပြောရရင် ဒါကလူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တယ်လို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့် စားချင်တဲ့သူတွေစားကြပါစေ။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျနော် ကွမ်းသီးရောင်းဝယ် ရေးလုပ်တာပြီးခဲ့တဲ့၂၀၀၀ခုနှစ်ကတည်းက စခဲ့တာပါ။တစ်နေ့ကို ကွမ်းသီးပိဿချိန်၁၅၀ဝန်းကျင် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်တယ်။” – ကိုမျိုးနိုင် (ကွမ်းသီးရောင်းဝယ်ရေး) “ကွမ်းယာကိုမစားပဲမနေနိုင်တဲ့သူတွေရှိသလို မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ကွမ်းယာနဲ့ မျက်နှာသစ်တဲ့သူတွေ လည်းရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော် ကွမ်းယာရောင်းတဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာမနက်မိုးလင်းတာ နဲ့ကွမ်းယာကိုမှာထားတဲ့သူရှိသလို အမြဲတမ်း အစဉ်တစိုက်ကွမ်းယာ မှာထားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကွမ်းယာကိုပိတ်ပင် မယ်၊တား မြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်အနေနဲ့က …Read more »
DVB Biz Debate – Multi Level Marketing စနစ်က စားသုံးသူကိုဘယ်လောက် ထိခိုက်နစ်နာစေသလဲ? “ကိုယ်ကထိပ်ဆုံးမှာနေပြီးတော့အောက်ကလူတွေကိုနင်းတက်တယ် ဆိုတာလက်မခံပါဘူး။ပြီးရင် ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲက လူတစ်ဝက် ပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေး။ အဲ့ဒါကို လည်းလက်မခံပါဘူး။ ခုနက ပြောသလို ချပြရဲလားဆိုတော့ ချပြရဲပါတယ်။အဲ့တော့ ဒီပွဲပြီးရင် ဘယ်နေရာမှာပြရမလဲရှင့်” ပရိသတ်- ကျော့ကျော့လှိုင်(Sucessmore) “ဥပဒေထုတ်မယ်။ဥပဒေကိုလိုက်နာမှာလားဆိုတော့ ကျနော်ကတော့ လုံးဝမယုံဘူး။ဘာ လို့လဲဆို တော့ သူတို့ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုတောင် အစအဆုံးမဖတ်ထားတဲ့ အသင်းဝင်တွေ အများကြီးပဲ။ကျနော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးမေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ အဲ့လိုလူတွေက ဥပဒေ ကိုဂရုစိုက်မှာ လားဆိုတော့ ရာခိုင်နှုန်းနည်းမယ် ။နောက်တချက်က ဥပဒေကို ဘာကြောင့် ပြတ်ပြတ် သားသား ထွက်စေချင်လဲဆိုတော့ ဒီလိုဥပဒေထုတ်ပြီးတော့စည်းကြပ်ထားရတယ် ဆိုတာကိုအများပြည် သူတွေကသတိထားမိဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့မျှော်လင့်တာက တစ်ခုဘဲ။ဒါက ဆေးလိပ် မကောင်းဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီတွေကို …Read more »
DVB Debate – “ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ကာလုံ အခန်းကဏ္ဍ” “ကာလုံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်က ၂ ခု။ ကာလုံအဆိုပြုချက်ဖြင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမယ်. နောက်တခုက အရေးပေါ်ကာလ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ ကိစ္စတွေ. အဲဒီမှာ အဓိကအားဖြင့် ၂ ပိုင်း။ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအလိုက် သမ္မတက ကာလုံနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာတာ။ တပြည်လုံးက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေလို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို အာဏာလွှဲအပ်တာပေါ့။” ဦးရဲထွန်း(သီပေါ) – နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ “တခမ်းတနားတွေ မလိုဘူး အချိန်မရွေး နေ့တိုင်းတွေ့လို့လည်း ရတာပဲ။ ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေ သာသနာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ မခေါ်လည်း ဒါပဲ။ ကာလုံခေါ်မှ တိုင်းပြည်ကို …Read more »
1726 July 20, 2017
DVB Biz Debate – အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ကို ဘယ်လိုတိုက်ဖျက်မလဲ? “ကော်မရှင်ပြန်မဖွဲ့ဘူးဆိုတော့ နိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တွေများ ရှိနေလို့လား ဆိုပြီးကျနော်စဉ်းစား ကြည့်တယ်။သူများနိုင်ငံတွေမှာ သမ္မတအသစ်တက်လာလို့ရှိရင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုတိုက်ဖျက် ဖို့ကသူ့ရဲ့နံပါတ်တစ် Agenda ဆိုပြီးကြွေးကြော်တာ။အဲ့တာကြီး ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ reform မှာကျန်တဲ့ ဟာတွေများရှေ့မရောက်မှာစိုးရိမ်နေလို့လားဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးထည့်သွင်း စဉ်းစားချက်ကြောင့်လားပေါ့နော်” – ဦးခိုင်ဝင်း(director, Sandhi Governance Institute) “ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုက အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခွန် အတုပ်မပေးရဘူး။လာဘ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ပိုက်ဆံက တကယ် တရားဝင် အစိုးရကိုပေးရတဲ့ပိုက်ဆံထက်အများကြီးသက်သာတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးကအကျိုးအမြတ်အဖြစ်ထွန်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။အမှန်တော့အကျိုးအမြတ်မရှိဆုံးဖြစ်ရမယ့်ဟာက အကျိုးအမြတ်အရှိ ဆုံးဖြစ်နေတယ်” – ဦးသန်းမောင်(တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ) “အစိုးရသစ်သက်တမ်းနဲ့အညီလို့ပြောလို့ရှိရင်အခုရှိနေတဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့က ငါတို့ဟာတရားဝင်သေးရဲ့လား၊မဝင်သေးရဲ့လားဆိုတဲ့အနေ အထားဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှတော့ သူတို့ဆီရောက်လာတဲ့ စာတွေကိုကိုင်တွယ်ဖို့အတွက်အရမ်းခက်ခဲမယ်။နောက်တချက်ကလဲသူ့မှာဘယ်လောက်အထိလုပ် ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသလဲဆိုတာကလည်း မေးစရာဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့က ကိစ္စတော်တော်များ အတွက် third party ထားမယ်ဆိုရင် အဂတိလိုက်စားမှုကအတော်အတင့်ကျဆင်း သွားမယ်ဆိုတာ ကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးထားပြီး အဆိုလည်းအောင်ထားတယ်။ဒါပေမယ့် …Read more »
1558 June 18, 2017
1695 June 15, 2017
1709 June 11, 2017